Bourilhon sy ny zavakantony amin'ny fampiasa sary | Famoronana an-tserasera
Roa herinandro lasa izay dia nasehonay taminay ilay Johansson lehibe ny sary an-tsaina lehibe sy ny fako mamorona ao amin'ny asa vaovao mitondra ny lohateny «Impact» izay, amin'ny fifangaroan'ny teknika isan-karazany sy ny tifitra tena izy, dia mamorona ny vokariny amin'ny famakiany ny lanitra sy ny tany ho roa izy.
Mpanakanto iray hafa mpomba azy no Vicent Bourilhon izay niverina niaraka andiana sary vaovao izarany ny ampahany amin'ny fahitany sy ny fahaizany mamorona ny tontolo manodidina antsika. Mpanakanto iray monina any Paris, ampahany amin'ny fakana azy no mametraka antsika amin'ny toerana maro ao an-tanànany malalany, araka ny hitanao amin'ity andiany vaovao ity.
Nihatsara hatrany i Bourilhon ny kantoo amin'ny fanodinkodinana sary ary ny sasany amin'ireto sary ireto dia tena vaovao sy manamorona ny ampahany amin'ilay mazika izay ezahan'ny mpaka sary maro amin'ny asany samihafa.
Ny fahitana tsy ampoiziny no mitondra antsika alohan'ny a fahatsapana fomba fijery lehibe hahazoana ny vokatra irina. Mpaka sary naka ny fakantsariny voalohany tamin'ny faha-16 taonany ary nandritra ny taona maro dia nanatsara ny fahaizany zavakanto afaka nitantara tamin'ireny sary nalainy ireny.
Rehefa mihalehibe ny zavakanto misy azy dia afaka mampiseho tsara kokoa i Bourilhon ny fahitany manokana amin'ny alàlan'ireny sary tsy azo antoka ireny. Mampiasa endri-tsoratra kely na rotsak'orana izy, mba hanakaiky kokoa antsika amin'ny andro misy an'i Peter Pan. Manova ny tontolo an-tanàn-dehibe izay manodidina azy izy mba hahazoany fomba fijery tsara indrindra ary manonitra antsika ny eritreritsika isaky ny mandinika ny sariny sasany isika.
Ianao dia manana ny tranonkalanao y ny facebook-nao for araho ny asanao izay ny saina sy ny famoronana dia misy dikany lehibe araka izay ahitanao ny sanganasa vaovao rehetra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Ny zavatra isan'andro dia niova ho lasa zava-mahaliana